Baarlamaanka oo muddo afar maalmood ah u qabtay Xukuumadda Federaalka in ay ku soo bandhigto Miisaaniyadeeda...
Warar: Sept 30, 2007
Ciidamo Itoobiyaan ah oo maqribnimadii xalay lagu weeraray bamboo gacmeedyo
Hay’adda Nabad sugida oo kulan deg deg ah ka yeelatay xaaladda Muqdisho
Isbahaysiga Xoreynta iyo dib u soo nooleynta Soomaaliyeed oo sheegtay in uu ka dambeeyo dagaaladii ugu dambeeyey ee Muqdisho ka dhacay
Dagaallo ba’an oo ciidamada cadowga lagu jabiyay.
Afhayeenka M/weyne ku xigeen ka Puntland oo ka warbixiyey Xaalada Dagaal ee Magaallad Laascaanood.
Guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG oo wax laga weydiiyey hadalkii Puntland ee ahaa haddii sharciga baatroolka ay baarlamaanku ansixiyaan in ay Puntland ka fiirsanayaan ka mid ahaanshada DFKMG, Aadan Madoobe oo arrintaas ka jawaabaya ka dhegeyso waraysiga idaacada British Broadcasting Corporation...
Baarlamaanka Federaalka ku meel gaarka ah ayaa kal fadhigiisii shalay waxa uu uga dooday qodobo dhowr ah oo ay ugu horeysay arrinta Miisaaniyadda sanadkaan ee Xukuumadda Federaalka.
Kalfadhiya Baarlamaanka ee shalay oo uu shir guddoominayey Guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Max’ed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) ayaa ugu dambeyn waxaa afar maalmood loo qabtay Xukuumadda Federaalka in ay ku soo bandhigto miisaaniyadeedii sanadkaan, waxa uuna sheegay Sheekh Aadan Madoobey in Xukuumadda horey muso saddex maalmood ah uga baaqsaday in ay miisaaniyadda guud ee Xukuumadda soo hor dhigto Baarlamaanka, balse haatan mudada loo qabtay ee afarta maalmood gudahood haddii ay ku keeni weyso Baarlamaanka hortiisa uu Baarlamaanku go’aan cad ka qaadan doono.
Baarlamaanka Federaalka oo isagu maalmahan dambe, si weyn dar dar xoogan ugu jira ayaa sidoo kale mudo afar maalmood gudahood ah u qabtay in ay ku hor yimaadaan baarlamaanka Wasaaraha aan weli hor imaanin Baarlamaanka si loola xisaabtamo, sidoo kale Baarlamaanka ayaa kal fadhigiisii shalay waxa uu si weyn uga dooday xarigii dhawaan loo gaystay Guddoomiyaha maxkamadda sare, waxayna xildhibaanada badankoodu arrintaasi ku tilmaameen in ay mid sharci daro ah oo aan loo soo marin habkii loo baahna inkastoo arrintaasi ay buuq weyn ka dhex dhaliyey Baarlamaanka.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugnaa Isgoyska Towfiiq ayaa waxaa xalay maqribnimadii lala beegsaday bambaanoyinka laga tuuro gacanta, waxayna qaraxasai markii uu dhacay ciidamada Itoobiya fureen rasaas ay ku guuriyootay haweenay halkaasi mareysay, iyadoo ciidamadii Itoobiya ay bilaabeen in ay xaafadaha horey u sii galaan.
Ciidamada Itoobiya ayaa halkaasi ka waday baaritaano ay ku sameynayeeen Gaadiidka iyo Dadka, iyadoo dadkii halkaasi ka dhawaan ay markiba goobtii isaga carareen si ay uga badbaadaan in la qabto ama dhib la gaarsiyo.
Dhinaca kale iska hor imaad socday toban daqiiqo ayaa waxa uu agagaarka shiirkole ku dhex maray ciidam ka tirsan Dowladda Federaalka iyo kooxo ka soo horjeeda, waxaana ku dhaawacmay labo qofood, iyadoo ciidamada dowladda lala beegsaday qaraxyo iyo rasaasta ka dhacda bistooladaha, sidoo kale waxaa isna nin da’diisa lagu qiysaay Afar sano lagu dilay Isgoyska Black Sea, ninkaasi oo mudo halkaasi yaalay ayaa waxa markii dambe is xilqaamay oo halkaasi maydkiisa ka qaatay dadka deegaanka oo kaashanaya Masjidka Al-Towba oo ku yaala agagaarka Black Sea.
Hay’adda Dowladda Federaalka u qaabilsan dhanka amniga saraakiishooda ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxayna kulankaasi uga hadleen arrimo la xiriira xaaladda Magaalada Muqdisho.
Kulankaan ayaa waxaa soo dedejiyey kadib markii kooxaha ka soo horjeeda weerar xoogan ay ku qaadeen saldhiga degmada Hodan halkaas oo ay khasaare ka soo g aartay Ciidamada Itoobiya, iyadoo la sii daayey wixii maxaabiis ahaa ee ku jiray saldhiga.
Kulankaan oo qaatay saacado dhowr ah ayaa waxaa looga dooday sidii wax looga qaban lahaa amniga magaalada Muqdisho oo faraha ka sii baxay, iyadoo ciidamada Dowladda qaarkood ay ka soo baxeen goobo fara badan oo ku yaala Magaalada Muqdisho.
Kulankaasi ayaa waxaa la isku afgartay in dib loo hawgeliyo dhamaan ciidamada kale ee ku sugan Magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka soo baxeen.
Ciidamada Dowladda ayaa waxaa weeraro uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda waxay sii kordheen dhalashada bisha Ramadaan kadib, waxayna ciidamadu dagaalo lagu soo qaaday kala kulmeen khasaarooyin fara badan.
C/llaahi Yuusuf oo shalay golaha Wasiirada hor dhigay qodobadii ka soo baxay shirkii dib u heshiisiinta Muqdisho
C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa shalay ka qaybgalay kulkan ay isugu yimaadeen golaha Wasiirada oo uu shir guddoominayey Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi, waana kulankii ugu horeyey oo uu Madaxweyne C/llaahi Yuusuf ka qaybgalo tan iyo markii uu khilaafku soo kala dhex galay Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha.
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf ayaa waxa uu Golaha Wasiirada u gudbiyey qoraal ku saabsanaa go’aanadii ka soo baxay shirkii dib u heshiisiinta ee dhawaan lagu soo gebagabeeyey Magaalada Muqdisho, waxa uuna kula dardaarmay golaha Wasiirada in si waafi ah uga doodaan go’aanadaasi oo uu ku jiro qodob ah in Dowladdu ogolaato in Golaha Wasiirada laga soo magacaabo Banaanka.
Sidoo kale Golaha Wasiirada waxay si aad ah uga doodeen xaaladda nabadgelyo ee Magaalada Muqdisho, waxa uuna kulankaani ka dhacay xarunta nabad sugida ee Magaalada Muqdisho, iyadoo goobtaasi si aad ah loo adkeeyay amaankeeda.
Ka qaybgalka Madaxweynaha ee kulanka Golaha Wasiirada waxay muujineysa in uu soo gebagaboobay khilaafkii u dhexeeyay Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha kadib markii uu horey khilaaf xoogani soo kala dhex galay Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha.
Isbahaysiga dhawaan looga dhawaaqay Magaalada Asmara ee la magacbaxay Isbahaysiga Xoreynta iyo dib u soo nooleynta Soomaaliya ayaa waxa uu sheegtay in ay ka dambeeyeen weeraradii lagu qaaday saldhigga degmada Hodan iyo Qabuuraha Barakaat.
“Waa dharbaaxadii ugu horeysay oo aan ku dhifano kuwa u adeega Ciidamada Itoobiya” ayay ku yiraahdeen war saxaafadeed ay soo saareen, waxayna sheegeen in dagaaladaasi ay gacan ku siiyeen shacabka Soomaaliyeed oo ay sheegeen in ay maalmahan lagu hayey Dhibaatooyin aad u xooggan.
Waxay sheegeen Isbahaysigu in ay sii wadi doonaan weerarad ka dhanka ah Ciidamada Itoobiya kuwa Dowladda tan iyo inta ay ka xoreynayaan dalka Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen.
Isbahaysiga ayaa waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gaari doonaan gudaha dalka Soomaaliyeed, si ay ugu guubaana shacabka Soomaaliyeed sidii ay isaga xoreyn lahaayeen wax ay ugu yeereen caddowga Ummadda Soomaaliyeed.
Dowladda Federaalka ayaa waxay horey digniin uga soo saartay cid kasta oo ka qaybgashay shirkii Asmara in ay gacanta ku dhigi doonaan.
Dil iyo xidhay dadwaynaha loogu gaystay meelo kala duwan.
Safaarada Wayaanaha ee Sudan oo noqotay xabsi lagu jidh dilo ardayda Ogadenya ee wax kabarata Sudan.
Wariyaha RX uga soo warrama dalka Ogaadenya ayaa noo soo sheegay dagaallo badan oo dhex maray CWXO iyo kuwa gumayisga Itoobiya, kuwaasoo si wayn loogu jabiyay ciidammada saama la-luudka ah ee gumaysatada Itoobiya. Dagaalladu waxay u dheceen sidatan;
27/09/07 weerar mir ah oo lala beegsaday ciidammada guamysiga ee ku sugan Dig, waxaa loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin. Mar kale ayaa isla ciidammada weerar mir ah lagu qaaday 28/09/07, iyadoo loo gaystay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Isla 27/09/07 malleeshiyo gumaysigu leeyahay oo lagu soo ururiyay La-helow, oo Doollo ka tirsan, ayaa weerar lala beegsaday, waxaana lana dilay 13, 5 kalana waa laga dhaawacay. Waxaa sidoo kale la qaqabtay dhawr malleeshiyadaas ka mid ah, kuwaasoo la iska sii daayay, ka dib markii looga digay inay gumaysiga mar denbe hub u qaadaan.
26/09/07 dagaal ka dhacay Booraale, oo Galaalshe ka tirsan, waxaa ciidammada gumausiga lagaga dilay 10 askari, 15 kalana waa lagaga dhaawacay.
24/09/07 dagaal ak dcay meesha lagu magacaabo Cali-fiidhe, oo Far-madow u dhaw, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 8 askari, 11 kalana waa lagaga dhaawacay.
23/09/07 dagaal adag oo isaguna ka dhacay Aloosane, oo Fiiq ka tirsan, waxaa ciidammada deac-darraysan ee gumaysiga lagaga dilay 14 askari, 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 23/09/07 dagaal ka dhacay Malqaqa, oo Galaalshe ka tirsan, waxaa gumaysiga lagaga dilay 9 askari, 10 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/09/07 Maraacaato dagaal ka dhacay waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 2 asakri.
21/09/07 Oba, oo Jigjiga ka tirsan, dagaal ka dhacay waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 7 askari, 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/09/07 Dheenka, oo Galaalshe ka tirsan, waxaa lagu miray ciidammada gumayusigu leeyahay, waxaana loo gaystay lhasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
18/09/07 iska hor-imaad dagaal oo ka dhacay Abooshe, waxaa cadowga lagaga dilay 2 askari, 11 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/09/07 dagaal sidoo kale ka dhacay Gob-yarey, oo Sallaxaad ka tirsan, waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 2 askari.
16/09/07 dagaal ka dhacay Ceel-xaar, oo Qabridaharre ka tirsan, waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 2 askari.
15/09/07 dagaal isaguna ka dhacay Ilaala-dhawrka, oo Fiiq ka tirsan, waxaa ciidammada gumayisga lagaga dilay 7 askari, oo 3 sargaal oo sarsare ay ku jiraan, waxaana lagaga dhaawacay 10 kale.
Isla 15/09/07 weerar mir ah oo lagu qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay magaalada Garbo waxaa loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
12/09/07 dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhex maray Jidhacle, oo Haar-cad u dhaw, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 7 askari, 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
11/09/07 cutub ka tirsan CWXO ayaa weerar mir ah ku qaaday ciidammada gumaysigu ee fadhigoodu yahay magaalada Sagag, waxayna u gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Isla 11/09/07 waxay CWXO weerar mir ah la beegsadeen ciidammada gumaysigu leeyahay oo hawlgal u tegay Haynsa-raac, waxayna u gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
10/09/07 dagaal aad u qallafsan oo CWXO iyo kuwa guamysiga Itoobiya ku dhex maray meesha lagu magacaabo Ku-naso, oo degmada Qallaafe ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 60 askari, waxaa sidoo kale lagaga dhaawacay 45 askari. Ciidammada gumaysiga waxaa dagaalkaas lagaga furtay Qoryo Waawayn iyo yaryar isugu jira iyo qalab millatari oo kale.
09/09/07 Kala-jeexa, oo Shilaabo ka tirsan, weerar loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay waxaa lagaga dilay 5 askari.
08/09/07 dagaal ka dhacay Jiingada, oo Fiiq ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 4 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 08/09/07 dagaal adag oo ka dhacay degmada Sallaxaad, waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 15 askari, 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
07/09/07 cutub ka tirsan CWXO ayaa weerar qorshaysan ku qaaday Xerada Kaaluu ee ciidammada guamysigu ku leeyihiin magaalada Shilaabo, waxayna weerarkaas guamysiga kaga dileen 35 askari, 26 kalana way kaga dhaawaceen. Ciidammada gumaysiga ayaa markii weerarkan lala beegsaday waxay ka guureen Xerada Kaaluu, iyagoo isugu urursaday Xeryo kale oo magaalada ku yaalla.
Ciidammada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya ayaa waxyeellooyin kala duwan oo dilay iyo xidhay isugu jira u gaystay dadwayne rayad ah.
20/09/07 waxay ciidammada gumaysiga ku laayeen meesha lagu magacaabo Fiiq-fiiqyaha Faar-wayne dadka kala ah;
1- Maxamed Cabdi
2- Axmed Maxamed iyo
3- Tamaan C/llaahi
Markii ay taariikhdu ahayd 23/09/07 magaalada Dhagaxbuur waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen odayaal ka soo jeeda tuulooyinkii dadka lagu xasuuqay ee Labiga iyo Hunjurri. Odayaashan ayaa la xidhxidhay, ka dib markii ay gumaysiga u sheegeen in dadwaynaha ay odayaasha u yihiini ay diideen inay sameeyaan ciidammo Dabaqoodhi ah. Odayaasha la xidhxidhayna waxay kala yihiin;
1- Ibraahim Maxamed Galbeedi
2- Maxamed Cabdi Baddal
3- Bishaar Cabdi Jiilaal iyo
4- Rashiid Cabdi Jiilaal
21/09/07 waxay ciidammada gumaysigu magaalada Yucub ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Canbaro Maxamuud Barre
2- Saxardiid Maxamuud Barre iyo
3- Daahir Cabdi Ibraahim
18/09/07 magaalada Iimey waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Saafi Faarax
2- Qaas Gurey
3- C/llaahi Xasan
4- Kor-matoorrey Suufi iyo
5- Cabdi-madoobe Xasan Qalaad
12/09/07 magaalada Fiiq waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen koox ka tirsan maamul ku sheegga iyo shaqaalaha degmada Fiiq, kuwaasoo diiday inay ka qayb qaataan hawlaha lagu abaabulayo malleeshiyooyin cadowga u adeega. Dadka noocan ah ee la xidhxidhay waxay kala yihiin;
1- C/llaahi Maxamed
2- Bashiir Cabdi Dhuurre
3- Saxardiid Maxamed Cali
4- Kayd Aw Xasan
5- Aaden Axmed Heebaan
6- Cali Sin-yare iyo
7- Caddeeye Mahdi.
Waxaa sidoo kale dadkan lala xidhay isla taariikhdaas kor ku xusan gabadh ganacsato ah oo lagu magacaabo Khadra Maxamed Ciireed.
Isla 12/09/07 waxaa magaalada Fiiq lagu soo xidhxidhay dad laga soo qaqabtay deegaanka Koray, waxayna kala yihiin;
1- C/llaahi Macalin Maxamed
2- Khaliif Macalin Maxamed
3- Shaafi Macalin Maxamed
4- Aamina Macalin Maxamed
5- C/nuur Macalin Maxamed
6- Khadar Muxumed Digaale iyo
7- Imiir Mawliid
08/09/07 magaalada Wardheer waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dad rayad ah, waxaana noo suuragashay inaan magacyadooda helno;
4- Cabdi-baasid, oo magaciisa oo buuxa aanaan haynin
5- Cawke C/qaadir iyo
6- Cali Shiraac Cilmi
Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Khartuum ee wadanka Suudaan ayaa sheegaya in Safaarada Itoobiya ee halkaas ku taala ay u soo tafa xaydatey sidii ay Ardeyda Ogadeniya ee wadanka Suudaan wax ka barata uga qaadi lahayd Baasaboorada Itoobiyaanka ah ee ay sitaan.
Ardeydan oo qaadashada Baasaboorka kala kulmay dhibatooyin badan markii ay Adis Ababa ka qaadanayeen ayaa waxay hada xukuumada Wayaanuhu bilawday in Ardeyda Jaamacadaha Suudaan wax kabarta laga uruurriyo Baasaborka, gaar ahaan marka Ardeygu u ubaahdo cusboonaysiinta Baasaborkaa iyo socdaalada ama adeegyada kale.
Dhacdooyinka u danbeeyay ee aan soo qaadan karo waxay dhacdey doraad abaarihii 11kii duhurnimo sacaada Africada Bari, kadib markii Ardey lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Maxamuud uu tagey Saafarada Itoobiya ee Kahrtuum isaga oo u baahnaa warqad socdaal uu ku soo booqanayo eheladiisa oo degen Ogadeniya.
Intaas kadib, Cabdiraxmaan waxa uu shalay subax ku laabtey Safaradii si uu u soo qaato Baasaborka iyo warqadii uu socdaalka, balse Cabdiraxmaan inta gudaha lala galay ayaa wxaa lagu xidhay qol yar oo u kaaya safaarada dhexdeeda, halkaas oo jir dil iyo garacaid lagu bilaabey.
Waardiyaha Safaarada oo u dhashey wadanka Suudaan ayaa maqley qaylada iyo cabaadka ka yeeraya Safaarada dhexdeeda, kadibna inta ay gudaha galeen ayey ka soo daayeen, waxaana loo qaadey Isbataal.
C/raxmaan ma aha Ardeygii u horeeyay ee laga qaado Baasaborkiisa, bilihii u danbeeyay waxaa laga qaaday Ardey badan Baasaborkii ay ku joogeen wadanka Suudaan.
XAGAABAXII 3:aad : WAX AAN LA ARAG, FARXAD, IYO YIDIDIILO
30 Luulyo ilaa 5 Agoosto 2007, wuxuu Iskuulka AL-AZHARSKOLAN isaga oo la kaashanaaya Dalladda Da´yarta Soomaaliyeed; Sveriges Unga Somalier (SUS) iyo Masjidka Islamiska Förbundet i Järva (IFIJ) qaban qaabiyeen XAGAABIXII 3-aad oo ku wajihnaa Waalidiinta Soomaaliyeed ee ilmahoodu dhigtaan Iskuulka, xubnaha ururada, Dhallinta iyo Bulso waynta Soomaalieed.
Abaabulkii Sannadkii hore ee 2006 tirada ka qayb galayaashu waxay dhannaayeen 420 qof. Saxaafada degmada Avesta ka soo baxda waa lagu soo qoray hawl galkaas. Ka qayb galayaasha xagaabaxa 3-sadaxaad waxay dhannaayeen 370 qof. Ammaanka dartiis ayaa sannadkaan hoos loo dhigay tirada dadka.
Ujeedada ugu muhiimsan ee Xagaabuxu waa; Nasashada Waalidiinta iyo wacyigelinta qoyska iyo da´yarta Soomaaliyeed ee deggen Stockholm.
Goobta Xagaabuxu safar 2 saacadood ah ayay magaalada caasimadda ee Stockholm u jirtaa.
Warka oo dhan Halkan ka akhri....
Warsaxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweyne ku xigeenka Puntland isla markaana uu akhriyey Afhayeenka Madaxweyne ku xigeenka Puntland Mudan,Ahmed Abdi Samad Cali Shire ayaa looga hadlay Marxalada dagaal ee ka jirta Duledka iyo Bartamaha Magaallad laascaanod oo ay ku loolamayaan Maamulada Somali Land iyo Puntland,waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in la soogaarey xilligi guud ahaan Gobolka laga saari lahaa Ciidanka Somali Land,Waa sida hadalka WarSaxaafadedkaasi loogu dhigaye.
Afhayeenka oo Saxaafada ka hor akhriyey Qoraalkaasi ayaa sheegay in Ciidamada Maamulka Puntland awood buuxda u yeesheen gacan ku heynta guud ahaan Gobolka Sool oo ay baryahanba isku Awood Tijaabinayeen Awoodaha Maamulada Somali Land iyo Puntland oo aysan ka muuqatan deegaanadooda sida uu Dagaalka Sokeeye ula harey Gobolada kale ee Somalia,Waxaana uu Afhayeenka carabaabay in Maamulka Puntland uu ahaa iska Caabin Ciidan kusoo gardarooday Dhulka uu ka arimiyo,Ciidankaasi oo uu ku sheegay kuwo hoos taga Maamulka Daahir Riyaale Kaahim.
Mudane,Ahmed Cabdi Samad Waxaa uu gaashaanka u daruuray in Saraakiil iyo Ciidan ka socda Samali Land ay gudaha usoo galeen Magaallada Laascaanood,Waxaana uu hadalkaasi ku sheegay inuu yahay mid ay buun buuniyeey Warbaahinta oo aan wax sal iyo raadtoona ka aheyn Magaallada Laascaanood,isagoo intaasi ku darey Afhayeenka in Raga la sheegayo inay Soo galeen Laascaanood inay joogaan Dhinaca Howdka Laascaanood,iyaddoo uu dhinaca kale sheegay inay jiraan Odayaal dhaqameedyo arinta ku jira oo ay soo dirsadeen.
Afhayeenka Waxaa uu dhinaca kale Waxba kama jiraan ku tilmaamay in Xalka Gobolka ay isku heystaan Somali Land iyo Puntland uu ku jiro in Xilkii Wasiirnimo lagu soo celiyo Ahmed Abdi Xaabsade oo ahaa Wasiirkii hore ee Arimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Puntland,waxaana uu taasi badalkeeda uu sheegay in Xaabsade uu ka mid yahay raga u dhashay Gobolka,laakiin ma ahan buu yiri nin ka weyn sharciga,isagoo arintaasi ka hadlaya waxaa uu yiri.
"Hadalka sheegaya haddi xilkii lagu soo celiyo qof shaqsi ah dagaalka Gobolka Sool waa joogsanayaa waxaan dhihi lahaa waa Eray ay isaga hadaaqeen,dad aan saaxiib u aheyn Mas'uuliyada iyo waxa ay tahay,Waxaana taasi daliil u ah Maamul Goboleedka Puntland kuma dhisna Nin iyo Xil jeclaysi ee waxay ku dhisan tahay Rabitaanka Shacbiga iyo Isimada Puntland,Marka Sidasi darteed anagu waxay inala tahay Arinta Gobolka Sool inay ka dhexeyso Dowlad Goboleedka Puntland iyo Rag lacag ka soo qaatay Maamulka Riyaale oo raba inay carqaladeeyaan Daganaanshaha Deegaanada Sool iyo Naag,Laakiin Taasi ma dhaceyso inta uu yiri Maamulka Puntland oo si xeeldheer uga feejigan qiyaanooyinka laga soo maleeyago Hargeysa" Waa sida uu hadalka u dhigay Afhayeenka Madaxweyne ku xigeenka Puntland Mudane,Ahmed Abdisamd Cali Shire.
Ugu danbeyntii Afhayeenka Mr,Ahmed Abdisamad Waxaa uusheegay in ay Maamulka Puntland Ciidankooda ku jiraan heegan kii ugu danbeeyey isla markaana xillikasta la filan karo dagaal,isagoo intaasi ku darey in Dadweynaha Reer Laascaanood ay is dajiyaan kuna kalsoonaadaan Maamulka iyo Ciidanka Puntland oo uu sheegay inay Nabadooda sugi doonaan,Hadalka Afhayeenka ayaa soo baxay kadib markii la shaaciyey in Laascaanood soo galeen Mas'uuliyiin ka socda Maamulka Somali land .
SomaliTalk.com | Sept 30, 2007
Labo Xildhibaan oo C/llaahi Yuusuf uga digtay in uu xil ka qaadis ku sameeyo Cali Geedi…
.Dagaalo aad u kharaar oo xalay ka dhacay Muqdisho...
.Markab Dagaal oo Faransiis ah oo loo soo dirayo Xeebaha..
.Ciidamadii Booliiska ee ku sugnaa Qabuuraha Barakaat oo..
.DFKMG waxba kama oga Barakaca Muqdisho ka socda...
.ONLF oo sheegtay in ay guulo ka gaartay dagaalo..
.Prof. Guure oo mar kale loo doortay Guddoomiyaha Ururka..
Wararka oo dhan ka akhri halkan... Sep 29